Inona no crème tsara indrindra ho an'ny hozatra marary? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Krema fanatanjahan-tena ho an'ny hozatra marary - vahaolana maharitra
Krema fanatanjahan-tena ho an'ny hozatra marary - vahaolana maharitra
Inona no crème tsara indrindra ho an'ny hozatra marary?
Salama ry havana, izaho Bob Schrupp Physiotherapist, Brad Heineck Physiotherapist Miaraka isika no mpitsabo aretin-tsaina malaza indrindra amin'ny Internet Raha ny hevitray, mazava ho azy, Bob. Ny hevitray foana, Brad, ary ny hevitray dia marina foana, eny azafady mba manontania anay fotsiny, Okay, anio Brad horesahintsika, ny menaka fanosotra amin'ny alàlan'ny fanaintainana dia afaka manala ny fanaintainanao> Fantatrao ny tendanao, ny lamosinao, ny sorokao? , Hip, ny fanaintainan'ny lohalika manampy ary ankehitriny manandrana mamaly izany fanontaniana izany izahay Manantena izahay fa nanao an'ity lahatsoratra ity androany tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny iherb.com dia manana dinika adala toa an'ity foana izahay.
Ho eny amin'ny, eny, hanana rohy eto ambany ve isika, ary misy antony itiavantsika iherb.com, mifanaraka amin'ny fiheverantsika sy ny fomba fiatrehana ny fanaintainana, sa tsy Brad? Ny fiezahana manao azy io amin'ny fomba mahitsy amin'ny fomba tsy mitaky opioid tsara dia tsy mila fanafody. Izay daholo ny entana lafo vidy rehetra.
Tsy misy fatiantoka ny manandrana an'io zavatra io. Midika izany fa tsy hisy vokany ratsy izany, tsy mampiankin-doha, na hanampy anao izany na tsia, ankoatry ny tsy fiovan'ny hoditra anao noho ny antony sasany, dia io ihany no fatiantoka ary iherb no fivarotana an-tserasera lehibe indrindra ho an'ireo voajanahary. manana marika 1.200 ary manana vokatra 35000 mahery izy ireo ary handeha hanohy aho sy i Brad anio alina ary hanisa azy ireo hahazoana antoka fa manana 35000 izy ireo. Ilay vazivazy taloha nataonay, ny zavatra faharoa tianay dia ny fikajiantsika rehetra momba ny vidiny. ny vidiny dia mazàna 30 ka hatramin'ny 40% ambany noho ny mandeha any amin'ny fivarotam-panafody na fivarotana sakafo ara-pahasalamana. Ka izahay rehetra dia manandrana mitahiry vola ary ny fampiasana ireo rohy etsy ambany hividianana ireo iray amin'ireo vokatra ireo dia hahazo 5 hetsy isan-jato.
Ataovy izay hahazoana antoka fa ahazoana tombony ho an'ny rehetra izahay ary ny zavatra farany tiako momba azy ireo Brad dia ny nanorenan'izy ireo an'ity orinasa ity miaraka amin'ny hevitra fa hanana ireto vokatra simba ireto izy ireo, nanangana trano fitehirizam-bokatra mifehy ny toetrandro izy ireo, madio tokoa, manana varotra haingana ianao vokatra, tsy mila miahiahy ianao fa lany daty daholo ireo zavatra ireo ary maharitra lavitra ny fiainany, tsy mila miahiahy ianao fa hipetraka eo amin'ny talantalana mandritra ny efa-taona. Nalain'izy ireo tamin'ny tany ilay izy, na hoe teo akaikin'ny diloilo misy motera izy io, fantatrao daholo izany, Eny, ka izaho sy Brad dia nanao lahatsoratra momba ny arofanina fanaintainana mialoha, ary afaka niresaka an'izany indray izahay androany, saingy ireto dia ny sasany amin'ireo vokatra ananan'izy ireo amin'ny fametahana fanaintainana Fa maninona isika no tsy mihetsika fotsiny ireo fa manana ny menaka manitra sy menaka ary mila mijery aho hoe inona no mahasamihafa ny menaka manitra sy ny crème ary ny menaka manitra toa manana menaka kely kokoa ao amin'izy ireo, ary mahatonga azy ireo ho somary matavy kokoa, matavy kokoa? Izany no ilazalazan'izy ireo azy, tsara tokoa, manana tovolahy telo izahay eto. Eny Bob, alohan'ny handehanantsika lavitra.
tanàna fitokonana Uber
Tsikaritro fa misy olona vitsivitsy any izay raha vaovao amin'ny fantsonay ianao azafady maka segondra hisoratra anarana aminay, manome lahatsoratra momba ny fijanonana ho salama, ho salama ary tsy hisy fanaintainana izahay, ary mampakatra sy hiala isan'andro izahay facebook ary tianay izahay satria tianay sy brad ny ho tian'olona any. Tsara izany, ka manana vokatra telo izahay. Ie, ary efa nandramanao daholo izy telo, Brad? Eny, ok daholo izy telo ary nanandrana roa aho satria nanana ny Tiger Balm ianao Ka tsy afaka nanandrana an'izany aho fa ny vadiko koa nanandrana koa Andao hanome ny hevitray momba azy roa ireto ka ity ny T relief sy Topricin Pain cream, tena tsy izy ireo manana fofona, marina eny izay no tiako momba azy yeah ka tsy nisy an'izany ary indraindray ny olona maniry ny fofona, marina, maniry ny hanitra izy ireo fa amin'ity tranga ity indrindra toy ny rehefa manindry any am-piasana aho na miasa akaiky amin'ny marary.
Nandohako teo ambony lohaliny àry aho mba hahitako fotsiny. Niofana niaraka tamin'izy ireo aho ary tsara ihany koa. Tsy namela pentina tamin'ny akanjoko na zavatra hafa izany.
Taiza no nanandramanao azy? Amin'ny lamosiko ambany, ary tena tiako ity iray ity, The T Relief, nahita fahombiazana tsara aho tamin'io ary notehiriziko tao amin'ny efitranoko ho fananako. Rehefa manana fanaintainana lamosina aho dia ampiasaiko ary mahafinaritra izany satria afaka miara-miasa aminy aho alohan'ny miasa ary tsy mila miasa miaraka amin'ireo marary. Tsia, tsy hiteny aho hoe fofona, fa ny sasany amin'izy ireo dia manana izany fofona menthol izany.
Eny, tiako indray izany, saingy indray, tsy te hiara-miasa amin'olona mety ho mora tohina kely aho. Eto amin'ny fitsaboana, tsy te hampihatra eau de cologne ianao satria misy olona tsy mahazaka azy na aza mihetsika tsara amin'izany, ka te-hiandany amin'ny tena. Eny, izany no mahatonga ireto miasa tsara, raha ny tokony ho izy, mba hanomezana anao fampitahana vidiny fotsiny, izany dia eo amin'ny $ 12.71 amin'ny zavatra hitako tao amin'ny tranonkalany, izany dia $ 9.99, ilay lehibe kokoa eto, ary ny balsan'ny tigra dia $ 6.80 Heveriko fa enina dolara dia nifantoka bebe kokoa.
Ie, ka mora vidy daholo izy ireo ary ny vadinao efa nanandrana azy izao? Lalàna. Ie. Ilay teo ivohoko no nampiasako.
Nanam-bintana kokoa aho tamin'io, saingy eto ianao dia mahazo ilay fahatsapana mangatsiatsiaka menthol izay nanampy, fa noho ny antony indray. Vao nanomboka nifanakalo hevitra aho fa nisy fofona menthol nampiasain'ny vadiko. Nahazo sery mangatsiaka izy ka napetrany teo amin'ny vozony. Heveriko fa toy ny fangirifiriana mamono an'i Brad, zavatra tena manokana izany izao, eo am-pitadiavana izay mety aminao ianao.
paompy misy bisikileta
Nojereko ireo fanamarihana ireo ary samy nanana ny heviny tsara izy rehetra ary misy olona maro izay tia azy ireo. ary hitantsika fa fitaovana ireo. Tsy hanaisotra ny fanaintainanao izy ireo, ny fanasitranana no holazaiko, fa manana karazana raikipohy eto isika.
Fantatrao fa izao lazainay izao dia ny fanampianao vonjimaika miampy fanatanjahan-tena, koa raha afaka mamantatra hetsika vitsivitsy hatao ianao satria matetika ny hetsika dia manasitrana ny fanaintainanao, ny fanamaivanana vonjimaika sy ny fanatanjahan-tena dia mety hidika fanamaivanana maharitra. Ka andao haka ny vozona ny vozao, andao haka an'ity crème ity, kosehina amin'ny vozonao ary ankehitriny dia mihena ny pa ao ahafahanao mivezivezy ao, fihodinan'ny tendany amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny hatoka izay hatombontsika matetika. Manitsy ny saokanao ianao. Apetaho ny crème.
Ary avy eo dia hanao fanitsiana saoka toa izao ianao, ary avy eo dia tianay ianao hiasa amin'ny fanitarana toy izany. Tena misy ifandraisany amiko io androany, Brad, satria narary tato aho, ary nanao an'io maraina io OK, tokony nametraka menaka fanosotra aho, ary tena nalalaka io satria efa nanao be dia be aho. Ie.
Ka dia nahomby tokoa izany, ho an'ny olona sasany, ity hetsika ity dia tsy mandeha tsara, ka ho an'ny olona sasany dia manintona ny saokanao ianao ary miondrika mankamin'ny fanaintainana. Ka efa tapitra eto ve ny fanaintainana? Mitraka. Miondrika amin'ny sisiny.
lasely bisikileta vehivavy
Ity no lalana itodihako satria manaintaina ahy amin'ity lafiny ity ny tsy mitongilana toy izao tontolo andro. Ka te-hanonitra izany ianao. Ho an'ny olona sasany dia mihodina izy, Brad, ary na dia mankarary amin'ny lafiny iray aza izy dia mandehana amin'ny lalana hafa.
Ary azonao atao koa ny mitsabo ny tenanao amin'ny lohalika kely eo an-dohanao ary amin'ny fihetsika tsara foana, mamelatra. Tsy izany ny hevitra, ataovy fotsiny ny rantsantan-tànanao ary ahinjiro, tokony ho tsapanao fotsiny ny fanaintainana mihinjitra. Ireo fanaintainana manindrona amin'ireo zavatra rehetra ireo dia tsy tianao atao izany, antenaina fa afaka manao izany mora foana ianao. Ity dia iray amin'ireo fitaovana izay hiatrehanao ny fanaintainana indray raha miala amin'ny fihinanana fanafody ianao. azonao ampiasaina fotsiny ity iray ity ity dia lehibe eo amin'ny tsanganana miampy, marina, brad iray hafa no ho soroka, maro ny olona manana olana amin'ny soroka, azonao atao ny manosotra ny menaka isaky ny avy eo ary tianay ianao hanandrana fihetsiketsehana sasany ny soroka, iray amin'ireo hetsika, izay matetika atombotsika amin'ny alalàn'ny dia ny fanitarana, noho izany ianao dia tena manampy tokoa, toy ny maka broomstick na ity ny fantsom-pipa PVC na tehina ary eto ambany ny ankihibiko ary hiasa sy hiasa toy ny izany indray, fantatrao, ny fanosotra na ny menaka manantena dia hanaisotra ny fanaintainana sasany Ary tokony ho zavatra tsy misy fanaintainana koa izany, afaka mandeha hatrany amin'ny fanaintainana ianao, saingy tsy misy intsony, fantatrao? somary mamelatra karazana a Mety tsara ny fanaintainana, fa raha io fanindronana io dia lasa lavitra loatra ianao ary mila mihemotra kely Fantatrao, ary mety ho zavatra miondrika mankany aloha izany, azonao atao koa ny miasa amin'ny miondrika mandroso , ka avelao aho handeha amin'ity lalana ity mba hanohizako hatrany fa tonga eto aho ary hanomboka hiasa amin'ny flexion avy eto.
Ie, miasa mankany amin'io lalana io Andao lazaina hoe ity no sandriko izay mety voan'ny aretin-tratra. Azonao atao ny mametaka ny tananao ary avelao ny sandry mahery na tanana tsara hanampy ny osa ary hiakatra izahay mandra-pandehananao ary afaka manao repoblika 10-15 ianao ary avelao izy hiala sasatra ary hiverina adiny iray na roa aorian'izay ary hiasa averiko indray izany Ary avy eo ny iray izay tianao hiasa amin'ny fotoana iray ary afaka mandray kofehy na fehikibo tsara koa Azonao atao ny manantona ny tananao eto ary mitondra azy manodidina toy izany ary handroso aho, Hiasa amin'io fomba io aho hisintona ary toa hafahafa izany, saingy tena iray amin'ireo izay mety tianao hampiasaina hatramin'ny farany izay nihatsara kokoa ny soroka, mba hampiakarana ny zavatra, azonao atao ny mahita raha manana olana ianao miverina. Azonao atao ny mampitaha na miakatra eto na eto io.
Ireto no fitaovana mora vidy ary hanampy anao hamaky ny tontolo andro ary izay ihany no tena fotoana sy asa hiatrehana ireo fanampiana kely ireo. Okay, misaotra ny rehetra nijery
Inona no tsara kosehina amin'ny hozatra marary?
Ireto nyhozatra tsara indrindraroboka tamin'ny 2021
Hozatra tsara indrindramanosotra ankapobeny: PenetrexfanaintainanaFikambananafanosotra.
Hozatra tsara indrindrafikosehana ho an'ny fanamaivanana: BiofreezefanaintainanaRoll-On an'ny gel fanampiana.
Hozatra tsara indrindrafikosehana ho fanamaivanana ny fanafanana: Sombra Warm TherapyfanaintainanaManamaivana ny Gel.
Tsara indrindraara-nofohozatramanosotra: Noxicare voajanaharyfanaintainanaFikambananafanosotra.
Tsara indrindrahemphozatramanosotra: Dr.
Inona no ampiasain'ny atleta amin'ny hozatra marary?
Ampiasao ireo menaka ireo amin'ny fanaintainana sy ny fivontosana
Menaka lavender. Lavender dia sarobidy amin'ny fahaizany milamina sy miala sasatra.
Menaka kininina. Ny kininina dia misy vokany mangatsiaka amin'nyhozatraary mampihena ny fanaintainana sy ny fivontosana.
Menaka chamomile romana sy alemanina. Ny menaka chomomile dia afaka manampy amin'ny fanaintainana sy ny fivontosana.
Manampy hozatra marary va ny menaka?
rehefafanaintainanahits, sasanyatletamahita fanamaivanana amin'ny fanatanjahan-tena maivana, fanorana, fanitarana, manontolo--kevi-pitantananahovitrovitra, akanjo fanerena, fanitrihana rano mangatsiaka na mafana, ary NSAID toy ny aspirinina sy ibuprofen.30 Mey 2017
Ny Vicks Vapor Rub ve mety amin'ny hozatra marary?
Ny NIH dia mamaritra ny camphor sy ny menthol ho analgesika lohahevitra, nafanaintainanampanala manosotra ny hoditrao. Dokotera ao amin'ny Mayo Clinic dia milaza fa ny vokatra misy camphor sy menthol dia afaka mamorona fahatsapana fihenam-bidy mahery vaika izay mety hanilika vetivety ny fahafahanao mahatsapa ilayfanaintainananyhozatra mararysy ny tonon-taolana.07/14/2020
fanazaran-tena lanja amin'ny kitrokely
Inona no crème anti-inflammatoire tsara indrindra?
Fanamaivanana ny fanaintainan'ny Bengayfanosotra
Ny aretin-tratra Bengayfanosotradia ampiasaina hanamaivanana ny fanaintainan'ny hozatra sy ny taolana. Izy io dia misy salicylates, camphor ary menthol. Bengay mihenamamaivayary misy vokany mangatsiaka sy manafana. Izy io koa dia azo alaina amin'ny fofona fofona ho an'ireo olona tsy tia fofona menthol.09/21/2020
Inona no crème anti-inflammatoire tsara indrindra ampiasaina?
Ny aretin-tratra Bengaycrème no ampiasainahanala ny fanaintainan'ny hozatra sy ny taolana. Izy io dia misy salicylates, camphor ary menthol. Bengay mihenamamaivayary misy vokany mangatsiaka sy manafana. Izy io koa dia azo alaina amin'ny fofona fofona ho an'ireo olona tsy tia fofona menthol.21 Sep 2020
Inona no fikosehana tsara indrindra amin'ny fanaintainana?
Tsara indrindraAmin'ny ankapobeny: Biofreeze Professional Relief Aerosol tsy misy loko. Ny biofreeze dia miaraka amin'ny tombo-kase atolotry ny klinika, ary marika hatokisana hatry ny ela izy iofanaintainan'ny vanin-taolanafanamaivanana. Ilay tsifotra tsy misy loko efatra-ounce dia manome fanamaivanana haingana ary mety ho izy ilaytsara indrindrakinova mbola. Ny fitohizany malama dia mitroka haingana.
Fa maninona no voarara ny Vicks?
Ny vokatra dia iray amin'ireo fitambaran'ny zava-mahadomelina 344, ao anatin'izany ny antibiotika sy analgesika maro, izay nodidian'i India ho voarara, tamin'ny filazany fa ny ekipa manam-pahaizana notendren'ny governemanta dia nahita fa tsy nisy 'fanamarinana ara-pahasalamana' ireo fitambarana ireo.16 mart 2016
Ahoana no fiasan'i Vicks amin'ny fanaintainan'ny hozatra?
Ao amin'nyVicks VapoRubizy io no singa voalohany indrindra miaraka amin'ny menaka camphor sy kininina, ao anaty toby solika. Menthol dia mahomby amin'ny fanamainanahozatrahampiroborobo ny fialan-tsasatra aryfanamaivanana ny fanaintainana. Mety misy fahatsapana fihenam-bidy voalohany izay manomefanamaivanana ny fanaintainana, saingy soloina fahatsapana hafanana izany.23 nov Desambra 2019
Iza no crème tsara indrindra ho an'ny hozatra marary?
Midika koa izany fa fampiharana tsy misy korontana raha eo am-pandehanana ianao ary tsy manam-potoana hanorana krema nentim-paharazana hozatra hozatrao. Ny Gel BioFreeze Pain Relief Roll-On Gel dia mampiasa menthol hamelezana ny hozatra marary amin'ny fahatsapana mangatsiaka izay manakana ny fambara fanaintainana.
Iza no crème tsara indrindra amin'ny fanaintainana?
Ity mpandidy fanaintainana ity dia manampy amin'ny fanalefahana ny tsy fahazoana aina amin'ny fampihenana ny fivontosana sy ny fivontosana. Izy io dia tsara indrindra amin'ny fanaintainan'ny hozatra vokatry ny fanaintainana tafahoatra na ny aretin-kozatra. Rehefa asiana topically dia miditra amin'ny hoditra ny asidra salicylic mba hampihenana ny fanaintainana sy ny fivontosana ao anaty tonon-taolana.
Inona no hotadiavina amin'ny fanamaivanana?
Fahombiazana: Mazava ho azy, ny zava-dehibe indrindra ilainao amin'ny fanamaivanana fanaintainana dia ny fanamaivanana amin'ny fanaintainana. Ny raikipohy sasany dia manome fanamaivanana eo noho eo, fa ny sasany kosa miasa mandritra ny fotoana. Ianao koa dia te-handinika hoe mandra-pahoviana ny fanosotra manome izany fanamaivanana izany ary impiry ianao no tsy maintsy mametaka azy io mba hitazomana ny fanaintainana. Nahasoa ve ity pejy ity?